I-Yahoo hack ichaphazele zonke iiakhawunti zayo zomsebenzisi | Iindaba zeGajethi
I-Yahoo ayiyeki ukuxoka, kwaye ukuba akunjalo, ubuncinci luluvo olunikayo ngokubhekisele kwiimpazamo zalo zokhuseleko.
Ngo-2013, uYahoo wahlaselwa apho Zonke iiakhawunti zomsebenzisi ezibhiliyoni ezi-3.000 zavezwa Nangona kunjalo, olu lwazi luxeliwe ngoku kuba ngaphambili, kwaye kuphela kwiminyaka emithathu emva kwento eyenzekileyo, inani elinikiweyo belisezantsi kakhulu.
Akukho namnye owabalekayo kuhlaselo olwahlupheka nguYahoo
Ukophulwa kwedatha enkulu uYahoo awayekuyo ngo-Agasti 2013 kuchaphazele iakhawunti yeebhiliyoni ezintathu zomsebenzisi wenkampani ezazisebenza ngelo xesha. Le yindlela i Ukushicilelwa Kutshanje kukhutshwe yinkampani yeVerizon, inkampani yabazali bakaYahoo okoko yafunyanwa ekuqaleni konyaka. Nangona kunjalo, inyani yile Inani labachaphazelekayo liyonyuka ngokuhamba kwexesha de lifikelele kwitotali.
Xa ingxaki yavela, kwaye kwada kwaba yiminyaka emithathu emva kweziganeko, kwi-2016, amanani okuqala athetha nge-500 yezigidi ezichaphazelekayo. Kungekudala emva koko, i-Yahoo yathi i-hack yathintela i-akhawunti eyi-1.000 yezigidigidi, oko kukuthi, isithathu se-akhawunti epheleleyo ekhoyo ngelo xesha. Kwaye ngoku, ngaphezulu kweminyaka emine emva kwenyani, yiVerizon eqinisekisa ukuba, enkosi kwitekhnoloji entsha ekhoyo kunye nomsebenzi wophando owenziweyo "ngoncedo lweengcali zangaphandle ze-forensic", Olu hlaselo lwalunzulu kakhulu njengoko lwaluchaphazela zonke iiakhawunti ze-Yahoo ngo-2013.
Khumbula ukuba ulwazi olucacisiweyo luqulathe amagama, iidilesi ze-imeyile, iinombolo zefowuni, imihla yokuzalwa, ipassword kunye nemibuzo yezokhuseleko kunye neempendulo zombini ezifihliweyo kwaye ezingabhalwanga. Ngokumalunga nedatha efana neeakhawunti zebhanki okanye ulwazi kwikhredithi kunye / okanye kumakhadi etyala, akukacaci ncam ukuba abhencekile na okanye hayi.
Okwangoku, uVerizon uthi iqela le-Yahoo liyaqhubeka nokuthatha amanyathelo abalulekileyo ukuphucula ukhuseleko. Ungathemba njani!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ukuqhekeka kwe-Yahoo kuchaphazele zonke iiakhawunti zabo zomsebenzisi
I-SPC iveza iiwotshi ezimbini ezintsha ngexabiso elincitshisiweyo, iSmartee Pop kunye neMidlalo